HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH SABTI 17-KA AGOOSTO 2019-KA
Saturday August 17, 2019 - 09:40:37 in Wararka by Mogadishu Times
DOWLADDA SOMALIYA OO SHEEGTAY INAY HEYSTAAN CULEYSO CAALAMI AH wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xuk uu madda Soomaaliya Maxa med Cabdi Xa yir Maaree ye ayaa sheegay in dowl adda Fed raalka Soomaali ya ay heystaan caqab ado uga imaanaya Caa lamka
DOWLADDA SOMALIYA OO SHEEGTAY INAY HEYSTAAN CULEYSO CAALAMI AH wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xuk uu madda Soomaaliya Maxa med Cabdi Xa yir Maaree ye ayaa sheegay in dowl adda Fed raalka Soomaali ya ay heystaan caqab ado uga imaanaya Caa lamka, hayeeshee ay u baahan tahay in taageero loo muujiyo.
Waxaa uu sheegay Wasiirka in Shacab ka Soomaaliyeed iyo madaxda qaarkood aysan ku baraarugsaneyn caqabadaha ay Dowladda Federaalka la kulmeyso culeyso iyo cul eysyada Caalamiga ah xilli ay ku mashquulsan tahay wax u qabashada dad keeda. "Waxaad mooddaa Shacabka Soo maaliyeed & madaxda dalka hoggaanko oda inaysan ku baraarusaneyn caqabada ha dowladda dhexeay la kulmeyso,balse halkii
laga caawin lahaa dad badani oo ka mid ahi waxgaradka iyo mas’uulkasta ay dowladda culeyska ku badinayaan si ay dowladda u jabto dadaalada ay waddo ay ku fashilanto ayuu yiri Wasiir Maareeye”.
Siyaasiyiinta, Waxgaradka iyo Shacab ka Soomaaliyeed ayuu sheegay in looga baahan yahay inay Midoobaan,isla mar ka ana ay garab istaagaan Dowladda Soom aaliya si dadka hortaagan dowladnimada Soomaaliya ee uu Caalamka ku jiro looga guuleysto.
Duqeyntan ayaa la sheegay in diyaar adaha dagaalka Marekanka oo kaa shanaya Ciidama da Dowl ad da Soo maaliya ay ka fuliy een Saldhigyo Ur urka AlShabaab ku leeyihiin dee gaanna da Mubaarak iyo Jannaale ee G/Sh/ Hoo se. Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya oo la hadlay Id aacada Ciidamada qalabka sida ayaa til maamay in duqeynta ka dhacday saldhiga Muba arag lagu dilay 21 Saraakiil iyo Ciidamo is ugu jira Soomaali iyo Ajaanib kana tirsa naa AlShabaab.
Sidoo kale Saraakiisha ayaa waxaa ay hadalkooda intaasi ku dareen in duqeyn 2aad ay ka dhacday deegaanka Jannaale ee duleedka Magaalada Marka,isla mark aana lala eegtay xubno ka tirsan AlShab aab khasaarana lagu garsiiyay.
AlShabaab weli kama hadlin warkaan ka soo baxay Saraakiisha Ciidamada Dowlad da ee Gobolka Shabeellaha Hoose kaas oo ku aadan in duqeyn lala eegtay Saldhig yo AlShabaab ku leeyihiin deega annada Mubaarak iyo Jannaale ee Gobolkaas.
AGAASIMAHA MADAXTOOYADA IYO GUDDIG GA QARAN EE SHAQAALAHA RAYIDKA OO KAARRINSADAY HORUMARINTA SHAQAALAHA DOWLADDA.
Agaasimaha Madaxtooyada Qaranka Dr.Nuur Diiriye Xirsi (Fuursade) ayaa kul an ku saabsan dardar gelinta Shaqooyin ka dowladda iyo tayeynta shaqaalaha ray idka.la qaatay Guddiga Qaran ee Shaqaa laha Rayidka Guddoomiyaha Guddiga Shaqaalaha Rayidka ah Md.Xasan Abshi row ayaa uga warbixiyey Agaasimaha Ma daxtooyada caqabadaha ku xeeran Shaq aalaha Dowladda, dedaallada lagu horum arinayo iyo kaalinta muhiimka ah ay ka qa adanayaan Olalaha Isxilqaan ee dib loogu dhisayo dalka.
Agaasimaha Madaxtooyada Qaranka Dr, Nuur Diiriye Xirsi (Fuursade) ayaa tilm aamay muhiimadda qorsheyaasha dib u habeynta shaqaalaha rayidka iyo sida ay aasaaska ugu tahay dib u hawlgelinta dha mmaan Hay’adaha Dowladda.
Dr.Fuursade ayaa ku bogaadiyey Shaq aalaha Soomaaliyeed dhabar adayga iyo kartida ay ku samata bixiyeen dalka wakht iyadii adkaa ee ay ku shaqeynayeen duru ufo ka adag kuwa shalay jira.
Agaasinka Madaxtooyada iyo Guddiga Qaran ee Shaqaalaha Rayidka ah ayaa ho osta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay joogteynta xaqsiinta shaqaalaha dowladda iyo kobcinta xirafaddooda shaqo.
CIIDAMADA AMMAANKA JUBBALAND OO SOO BANDHIGAY WAXYAABAHA QARXA
Ciidamada Ammaanka Maamulka Jub baland ayaa howlgal ay ka sameeyeen de egaano ka tirsan G/Jubbada Hoose ayaa waxaa ay ku soo saareen miinooyin dhowr ah oo lagu Aasay waddooyin ka qaar ee Gobolkaasi.
Saraakiil ka tirsan Ciid amada Jubbala nd ayaa waxaa ay sheegeen in ho wlgalka lagu soo saaray il aa Shan Miino,kuwaas oo AlShabaab ay ku Aaseen waddada u dha xeysa deegaannada Ban geeni iyo Ko ban oo ah Aagga degmada Jamaamme halka as oo ay gacanta ku hay aan AlSha baab.
Miinooyinkaan oo ay soo bandhigtay Hay’adda Nabadsugida Jubbaland ayaan anSaraakiishu sheegin in wax dad ah la gu soo qabtay howlgalkaas, hayeeshee waxaa ay sheegeen in uu weli socdaan ho wlgallo kale oo ka dhan ah AlShabaab, isla markaana lagu doonayo in degaana da ay heystaan AlShabaab looga saaro. "Ciidanka ammaanka Jubbaland gaar ahaan cutubka u tababa ran ka hortaga wa lxaha Qarxa una taagan mar walba ka hor taga dhagarta AlShabaab ayaa ka soo saaray Miinoyinkan goobo ay AlSha baab geliyeen oo ah inta u dhaxeysa tuu loyinka Bangeeni iyo Koban. Waa aagga D/Jammaame G/J/Hoose ayaa lagu yiri Warka Hay’ad da NISA ee Jubbaland”.
Inta badan deegaannada iyo degmooy inka GJ/ubbooyinka iyo Gedo ee Maamul ka Jubbaland ayaa waxaa ka dhaca qarax yo miinooyinka nooca dhulka lagu aaso ah ,kuwaas oo lala eegtay Gaadiidka Ciida mada Dowladda, kuwa Jubbaland iyo AMISOM, iyada oo mas’uuliyada qaraxyad aas ay sheegtaan AlShabaab.
ISRAEL OO KA LAABATAY GO’AANKII KA DHAN KA AHAA RASHIDA TLAIB HAL SABAB DARTEED
Wasaaradda arrimaha gudaha Israel, ayaa sheegtay inay Rashida Tlaib oo ka tirsan Aqalka Wakiilada Mareykanka, u ogolaatay inay booqato qoyskeeda degan Daanta Galbeed ee dhulka la haysto ee Falastiin. Go’aankan ayaa yimid maalin ka dib markii R/wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu uu sheegay inuusan ogolaan doonin in Rashida iyo Ilhaan Cumar oo iya na ka tirasan Aqalka Wakiilada ay halkaas ku tagaan booqasho ay qorsheeyeen.
Hase yeeshee waxa uu sheegay in had dii Tlaib ay soo dirsato codsi ay ku booqa neyso qoyskeeda sababo bani’aadanimo dartood, ay Israel ka fakari doono,haddii ay ballanqaado inaysan dhiirigelin in la qa adaco Israel.
Tlaib ayaa khamiistii warqad u dirtay W/ Arrimaha Gudaha Israel ayadoo tiri "waxa an codsanayaa fasax aan ku booqdo ehel keyga, gaar ahaan ayeydey oo 90 jir ah.” waxa ay intaas ku dartay in tani ay noqon karto fursaddii ugu dambeysay ee ay ku aragto ayeydeed.
"Waxaan xushmeyn doonaa shuruudaha booqashada, mana dhiirigelin doono qaa dacaad ka dhan ah Israel, inta aan ku gu da jiro booqashadeyda” ayey Tlaib ku tiri warqadda oo ay baahiyeen warbaahin ta Israel.
W/Ar/Gudaha Israel ayaa bayaan ay ma anta soo saartay ku sheegtay "inay go’aan satay in la Oggolaado Booqashada Tlaib ee ayeydeed oo 90 jir ah, sababo bani’aad annimo dartood.” Go’aanka ka dhan ah Ilhaan ee loogu diiday booqashada ayaa weli sidiisa u ta agan
Dhinaca kale wararkii ugu danbyey ayaa sheegaya inay rashida sheegtay inaysan tegi doonin sraael oo ay baajisay booqa shadeeda ayna u Qoraneynin codsi sida
ay dalbadeena srael xigasho:VOA
SHIL SABABAY DHIMASHO & DHAAWAC OO KA DHACAY MUDUG
Wararka laga helayo G/ Mudug ayaa waxaa ay sheegayaan in deegaanka Xero dhagaxleey ee Bariga Gobolkaasi Mudug uu Shalay ka dhacay Shil Gaari oo geyst ay khasaaro dhimasho iyo dhawacah
Shilka ayaa yimid ka dib markii uu de egaan kaasi ku rogmaday Gaari yar oo in ta badan dadka ku nool Gobolka Mudug ay u adeegsadaan safarka,isla markaana Gobolkaas looga yaqaano (Kob & Buud), waxaana shilkaasi ku geeriyooday Wiil Dhallinyaro ah halka 3 Ruux oo kale ay ku dhaawacmeen.
Wariyeyaal ku sugan G/Mudug ayaa waxaa ay sheegeen in 3 Ruux ay qabaan dhaawacyo fudud,hayeeshee la geeyay mid ka mid ah Isbitaallada yar yar ee ku yaalla deegaanka Xerodhagaxleey oo 60 km u jira degmada Hobyo ee gobolkaasi Mudug.19kii Bishii November ee Sanadkii 2017 ayaa shil gaari oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah waxaa uu ka dhacay isla deegaanka Xerodhagaxleey, waxaana dadka shilkaasi ku waxyeeloob ay dhamaantood ay ahaayeen Shacab.
GUDDOOMIYE TUULAX : WAA LAGA SII WAR HAYAY QORSHAHA DADKA SHALAY LA TOOGTAY
Guddoomiye kuxigeenka Amniga iyo siyaasadda maamulka G/Banaadir ayaa fa ahfaahin dheeraad ah ka bixiyay afar ru ux toogasho lagu dil ay shalay.
Wuxuu sheegay in laamaha Amniga ka sii war hayeen qorshaha ay doonayeen inay ku dilaan agaasime waa xeedka ka tirsanaa Wasaaradda Waxbarashada oo lagu mag acaabo Cabdi Garre. Qorshahoodu wuxuu ahaa marka laga soo baxo salaada Jimca ha inay toogasho ku dileen agaasimaha, laakiin ciidamada ayaa goobta ugu sii diya argaroobay mar kii ay ogaadeen in qorsh ahoodii fashilmay waxaa ay bilaaben inay dagaalamaan, goobta ayaa lagu toogtay 3dii ragga ahaa qof Dumar ah oo caawi neysay.'' ayuu yiri Tuulax
Goobta uu howlgalka ka dhacay ayaa waxaa gaaray Guddoomiye kuxigeenka Amniga iyo Siyaasada Gobolkan Banaadir Maxamed C/hi Tuux iyo Saraakiil ka tirsan ciidamada Booliska Soomaaliyeed.
ERGOOYIN FARABADAN OO SHALAY GAARAY MAGAALADA DHUUSAMAREEB
M/Dhuusamareeb oo ah Xarunta ras miga ah ee Maamulka Galmudug waxaa shalay gaaray inta badan ergooyinka bee laha ee ka qeyb galaya shirka dib u heshii siinta Galmudug,kaas oo la filayo in sabtida uu furmo. Ergooyinkaan oo kala yimid degmooyin iyo deegaanoo ka kala tirsan G/Mudug iyo Galgaduud ayaa wax aa Garoonka diyaaradaha M/Dhuusamar eeb ku soo dhaweeyay xubno ka socda W/ Arr/ G & Guddiga shirka dib u heshiisi inta. Sidoo kale isla Xubnaha ayaa Maan ta waxa la dejiyay Xarumihii loogu talo gal ay si sabtda uu u furmo Shirka dib u hesh iisiinta beelaha dega deegaannada Maam ulka Galmudug.
Guddoomiyaha Guddiga qaban qaab ada shirka Dhuusamareeb C/raxmaan Ba adiyow ayaa shee gay inay soo gaartay dhammaan liiska Ergooyinka ka qeyb gak eysa Shirka,isla markaana dhankooda ay diyaariyeen waxyaabihii u baahnaayeen.
Qaar ka mid ah Odayaasha dhaqanka deegaannada Galmudug ayaa horay u sheeg ay inaysan shirkaasi ka qeyb gale yn, ha yeeshee aan weli la ogeyn inay ka dhabeen doonaan iyo in kale,waxaana we li guddiga aysan soo bandhigin inay jiraan beelo diiday ka qyeb galka Shirkaas.
AQRI: GOLAHA WASIIRADA OO ANSIXIYEY HESHIIS AY SOMALIA GASHAY, WAR CULUSNA KASOO SAARAY DAGAALKII AWDHEEGLE
Kulan ay shalay Muqdisho ku yeeshe en golaha wasiirrada JDFS ayaa lagu am maanay gu ulaha xooggan ee ciidamada xoogga dalku ka soo hooyeen furimaha da gaalka iyo howlgallada kale ee la gu baac sanayo argagaxisada. Wasiirka W/Warfaa finta, dhaqan ka iyo dalxiisaka XFS oo ka war bixiyay kulanka oo uu guddoomiyay R/Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa she egay in gol uhu uu si gaar ah u bogaadiy ay guulaha ay ciidanku kasoo hooyeen da gaalkii D/A wdheegle iyo jabka ay gaarsiiy een Al shabab.
Intii uu shirku socday ayaa golaha wasi irradu waxa ay ansixiyeen heshiis isafga rad ah oo u dhexeeya wasaaradaha Shaq ada ee DF S iyo Turkiga. G/wasiirrada ee JFS ayaa sidoo kale ka hadlay saameynta dhaqaale ee bulshada Soomaaliyeed uu ku yeelanayo qaraarka tirsigiisu yahay 1267 ee hor yalla golaha ammaanka ee QM,islamarkaana ay gadaal ka riixeyso do wladda Kenya.
SACUUDIGA OO LAGU EEDEEYAY IN UU DHIB AATO U GEESTAY QAXOOTI U DHASHAY ITOOBIYA
Sacuudiga ayaa lagu eedeeyay inuu tacadi bani Aadannimo u geystay qaxooti Itoobiyaan ah oo si tahriib ah ku galay Dalkaasi. Qaar ka mid ah qaxootigaan oo qaab ta rxi lah loo ga soo dajiyay M/Addis Ababa ayaa sheeg ay in dhibaato loo geestay intii ay ku guda Jireen Xabsiga.
Dhanka kale mas,uuliyiin ka tirsan hey, ada u dooda xuquuqda aadanaha oo ku sugan caasimada Itoobiya ayaa xaqiijiyay in dadkaan qaarkood ay ka muuqato jirdil loo Geestay.
Sacuudiga ayaa dhanka kale lagu eede eyay in 100laal qaxooti Itoobiyaan ah ay ku jiraan xabsiyada dalkaasi kuwaasi oo wali aan dalkooda lagu soo Celin.
SHACABKA REER BALEDWEYNE OO SI WEYN U SOO DHAWEEYEEN BILAABADIIDA ISTICMA ALKA SHLINKA SOOMAALIGA MAR 2AAD
Shacabka ku dhaqan M/ Baledweyne ee G/Hiiraan ayaa si diirran u soo dhawe eyay inay markale magaaladaasi laga oggolaado isticmaalka lacagta kunka shilin Soo maaliga. M/Baledweyne ayaan in mu ddo ahba la ga isticmaalin kunka shilin, ka dib markii ganacsatada ay ku sababeeye en in laca go been abuur ah la soo geliyay magaalada, taasoo ay sheegeen inay shar cidarro ah adeegsigeeda.
Kulan ay Khamiistii yeesheen Maamul ka G/Hiiraan, kan de gmada iyo ganacsat ada reer Hiiraan ayaa waxay ka soo saare en farriinta ah in laga bilaabo 15ka, bi sha 8daad ee sanadkan ay dadku wax ku iibsan karaan kunka shilin.
Md.Cabdinuur Macallin oo ku hadlayay afka ganacsatada reer Hiiraan ayaa ku dhawaaqay in dadku wax ku kala iibsan ka raan kunka shilin ee laga isticmaalo Gobo lada Koonfurta, ee aan ahayn midka faal sada ah.
Md.Cabdinuur Macallin ayaa Maamulka G/Hiiraan ugu baaqay in tallaabo laga qa ado dadka kunka been abuurka soo geliya M/Baledweyne ee Xarunta G/Hiiraan.
Arrintan ayaa waxaa si diirran u soo dhaweeyay shacabka ku dhaqan M/Baled weyne, waxayna sheegeen inay ku faraxs an yihiin go’aanka ay si wadajirka ahi u soo saareen Maamulka Gobolka iyo gan acsatada reer Hiiraan.
Md.Cabdalla Muumin Barre oo ka mid ah bulshada ku nool M/Baledweyne ayaa wax wanaagsan ku tilmaamay in markale ay la jaanqaadaan shacabka kale ee ku dhaqan min Gedo illaa Galgaduud, iyadoo goboladaasi laga isticmaalo kunkii hore ee shilin Soomaaliga.
Muumin ayaa intaa ku daray in dadka re er Baledweyne ay iminka dareemayaan in neef ay ka soo fuqday, islamarkaana ay ka mahad celinayan in kunka shilin la ga qaado xayiraaddii ay ganacsatada saa reen. Si kastaba haahaatee bulshada ku no ol xaafadaha kala duwan ee M/Baledw eyne ayaa aad u hadal haya warka ku aad dan inay waxku iibsan karaan kunka shilin
C/KARIIN QALBIDHAGAX OO GAARAY KIS MAAYO & SOO DHAWEYN LOO SAMEE YAY
M/Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose waxaa Shalay gaaray Cabdi Kariin Muuse (Qalbidhagax) oo ka mid ah Ma daxda Jabhada ONLF, ka as oo hadda ka hor Dowl adda Soomaaliya ay ku wa reej isay Itoobiya.
Soo dhaweynta Qalbidhagax ee kismaa yo ayaa waxaa ka qeyb qaatay Masuuliyin katirsan 2da Gole ee Dawlad Gobaleed kaJubbaland,Xildhibaano ka tirsan Labada Aqal Dawladda Fadaraalka Somalia, Isima da iyo Waxgaradka jubbaland iyo Shacab ka Reer Kismaayo
Intaasi kadib Cabdi kariin Qalbidhagax ayaa waxaa la geeyay Guriga Martida ee Magalada Kismaayo,halkaas oo uu kula kulmid oono Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
Booqashada uu Shalay Magalada kis maayo ku tegay Cabdi Kariin Muuse (Qal bidhagax) ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Magalada Kismaayo ay ka socdaan ol ole ku aadan doorashada Guddoonka Ba arlamaanka & tan Madaxweynaha.
Ilhaan Cumar ayaa soo saartay qoraal ay uga jawaabeyso tallaaba da Israa’iil ay ugu diiday in dhulkeeda ay galaan iyada iyo xildhibaan kale oo lagu magacaabo Rashida Dhaalib.
"Xubin ahaan oo ka tirsan guddiga Arrimaha Dibadda (Congresska), waa shaqadeyda in aan la socdo kaalmada caalamka ee Mareykanka uu bixiyo iyo sharciyeynta ku dhaqanka xuquuqda aadanaha ee daafaha caalamka”, ayey Ilhaan ku qortay warbixin at ku baahisay boggeeda Twitterka.
"xayiraaddii Trump ee Muslimiinta uu saaray waa tallaabada ay Israa’iil meel marineyso, markan waxaa la bartilma ameedsaday laba xubin oo si sharci ah loogu doortay aqalka Congresska”.
"Waxaa wax laga xumaado ah in arrintan aysan la yaab lahayn, marka loo eego dhanka bulshada, kaas oo si joogto ah oga goos haysta dadaallada nabadda”, ayey tiri Ilhaan.
Arrintan ayaa imaaneyso iyadoo Israa’iil ay xayiraad kusoo rogtay labo gabdhood oo ka tirsan aqalka Congareska dalka Mareykanka kuwaas oo si weyn u dhaleec een jiray Israa’iil, waxaana laga mamnuu cay inay booqasho ku tegi karaan.
NIN GANACSADE CAAN AH KU DILAY QARDHO OO LAGA SOO QABTAY YEMEN
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Boosaaso ayaa waxa ay sheegayaan in Safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya Yemen Cabdullaahi Xaashi Shuuriye uu ku guuleystay soo qabashada nin ku eedaysan dilkii ganacsade Dirir Cabdi Gufure oo 20July2019 lagu dilay magaalada Qardho ee xarunta gobolka karkaar.
Mas’uuliyiinta Safaaradda ayaa waxaa kala wareegay mas’uuliyiin ka tirsan Puntland oo ay kamid yihiin Wasiirudowlaha wasaaradda Arrimaha gudaha Maxamed Axmed Kunle, guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays (Dhedo), taliyaha Booliiska gobolka Bari G/sare Xuseen Cali Maxamuud iyo sarakiil kale.
"Waxaan arkey qoraal ka soo baxay xukuumadda oo la leeyahay waa ajandihii shirka dib u heshiisiinta Dhuusamareeb oo muddo 5 maalin ah soconaya. Wuxuu u muuqdaa siminarraadii ay hay’adaha NGOyada ah qaban jireen. Waxaa is waydiin leh iyadoo ay beelo 11 kii ka mid maqanyihiin, kuwo kale oo Hobyo ku shirayana ay codsadeen in dib loogu dhigo shirka si markii koodu soo idlaado uga qaybgalaan, waa ayo beelaha shirka loo furayo, xaggeese loo cararayaa? Siminaar dad meelo laga soo uruuriyey waa loo qaban karaa, laakiin shir dib u heshiisiin wuxuu u baahanyahay beelihii la heshiisiin lahaa, la xaddido baaxadda qodobbada laga heshiinayo iyo marjic khilaafka loo celiyo” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
Waxaa uu intaa kusii daray "Dowladda Federaalka ah iyadaa Galmudug kala qeybisay, haddana khilaafkii iyo kala qaybintii ayey sii waddaa”
MAXKAMADDA SERE EE PUNTLAND OO SAAKAY U FARIISANEYSA DHAGEYSIGA KIISKII CAA’SHA ILYAAS.
Maxkamadda Sare ee maamulka Puntland ayaa Sabtida Saakay lagu wadaa in la hor geeyo Seddax nin oo loo heyso dil iyo kufsi waqooyiga magaaladsa Gaalkacyo, loogu geystay Marxuum Caa’sha Ilyaas Aadan oo ahayd gabar 12sano jir ah.
Saddexda xukmane oo kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, Cabdisalaan Cabdiraxman Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige, ayaa hore Maxkamadda Derejada kowaad ee gobolka Nugaal waxay 12kii May ee sannadkan ku xukuntay dil toogasho ah, kadib markii ay Maxkamaddu sheegtay in lagu helay kiiska Caa’isha.
Sidoo kale Rafcaan ay ka qaateen xukunkaas kadib ayaa Maxkamadda Rafcaanka gobolka Nugaal waxay 30kii June ee sannadkan mar kale ku xukuntay dil toogasho ah, kaas oo ay Rafcaan kale uga qaateen Maxkamadda sare ee Puntland, taas Sabtida saakay u fariisa doonta dhageysiga dacwadda loo heysto.
WAQTI KORDHIN CUSUB OO LAGU SAME EYAY IS DIIWAANGELINTA MUSHARAXIINTA JUBBALAND
Guddiga Madaxa bannaan ee xudduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa muddo kordhin ku sameeyay wakhtigii isdiiwaan galinta musharraxiinta aan horrey isku diiwaan galinin.
War qoraal ah ay soo saareen Guddiga ayaa waxaa ay ku dhawaaqeen in muddo saddexmaalin ah lagu daray wakhtigii isdiiwaan galinta musharraxiinta Madaxweynaha Jubbaland ee aan horrey isku diiwaan galinin.
Wakhtiga isdiiwaan galinta Musharaxiinta harsan ee doonaya inay is Diiwaangeliyaan ayaa ka bilaabaneysa 17da bishaan oo ku beegan Maanta,isla markaana waxaa ay ku egtahay 19ka Bishan August 2019
Doorashada Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa iyana ku yimid dhib u dhac taasi oo lagu waday inay dhacdo 19ka Bishan,hayeeshee la filayaa in la qabto 22ka bishaan oo ku beegan Khamiista soo socota.
Shalay ayay aheyd markii qaar kamid Musharaxiinta u taagan qabasha xilka Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland ee Is diiwaangeliyay ka soo horjeesteen in waqti kordhin lagu sameeyo Is diiwaangelinta Musharaxiinta.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James swan oo dhawaan gaaray Magaalada Kismaayo ayaa Madaxda Jubbaland iyo Guddiga doorashada ka Codsaday in muddo kordhin lagu sameeyo waqtiga Is diiwaangelinta Musharaxiinta si ay isugu Diiwaangeliyaan Musharaxiinta harsan.
Hoos ka akhriso Qoraalka ka soo baxay Guddiga Doorashada Jubbaland oo lagu qoray Luuqa Engalishka.
QORSHAHA AY MAN UNITED KU DOONEYSO INAY ISAGA IIBISO ALEXIS SANCHEZ OOQABAD WEYN AY HORTAAGAN TAHAY
Xiddiga ku fashilmay Manchester United Alexis Sanchez ayaa waxaa doonaya shan kooxood oo Talyaani ah laakiin mu shaharkiisa isbuuclaha ah ee uu ku qaato haatan 505 kun ginni ayaa dib u dhigaya in heshiis uu dhaco.
Waxaa la sheegay in tababaraha Man United Ole Gunnar Solsk jaer inuusan doo neynin 30 jirkaan islamarkaana uu ku qa sbi doo no inuu tababar la qaato kooxda juunyeerka sidii uu Mourinho yeelay Shw einstieger.
Juventus, Napoli, AC Milan, Roma iyo Inter Milan ayaa dhama antood xiiseynaya saxiixa xiddiga reer Chile Ale xis Sanchez sida ay sheegtay wargeyska The Times.
Waxaana Man United ay dooneysaa inay iska dirto Sanchez ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga Yurub 2da bisha September, waxaana ay diyaar u yihiin inay qeyb ka bixiyaan mush ahar kiisa iya doo Roma ay amaah ku doon eyso.
Roma ayaa amaah ku rabto xiddigii hore ee Arsenal laakiin waxa ay diideen inay bixiya an mushaharkiisa qaal iga ah, iyadoo Daily Mail ay sheegtay in musha harkiisa uu xi taa gaar ayo 560 kun ginni marka lagu da ro heshiiskii sa xuquuda mu uqaalka ah.
Sanchez ayaa magac ku sameysay ko oxda Talyaaniga ee Udinese sideed sann ad ood ka hor sidaasi darteed inuu Talya aniga aado kuma noqoneyso wax cusub.
Waxaana kooxaha Talyaaniga ay aamin san yihiin in shantii sannadood ee uu joog ay Udinese inay la micno tahay inuu haat an ku najixi doono horyaalka Talyaaniga.
M/Muqdisho ayaa waxaa habeen hore lagu qab tay Xaflada isku aadka wareega Guruubya da tartanka kubadda Cagta Deg mooyinka Gobolka Banaadir oo sanad kas ta la qab to. Degmooyinka G/ Banaadir ay aa wax aa loo qeybiyay afar Gro up oo 3 group ay ku dagaala mi doonan afar kooxod halka gro upka A ay ku dagaa lami doon an shan kooxood. Guddoomiye ku xigeenka Maamul ka G/Banaadir Dhan ka arr imaha Bulshada iyo Wacyi Galinta Marwo Ba sma Caamir Axmed (jaktti) ayaa ku dhawa qday in tartanka kuba dda Cagta Degmo oyinka G/Banaadir uu bilaa ban doono 1da Bi sha soo socota ee September 2019.
Tartankaan ayaa waxaa ku tartami do ona n 17ka Degmo ee G/Banaadir. Tart anka waxaa difaacanaya degmada waab eri oo qaaday laba sanno oo isku xigta.
Hoos ka Daawo sida ay isugu bee gmeen Degmooyinka Gobolka Banaadir.
Kooxda haweenka ah ee kubadda Kol eyga Muqdisho City Club ayaa sannadkan ku mataleysa Soomaaliya tartanka caa la miga ah ee koleyga dalalka geeska Afrika.Tartanka oo ay ka qay bgalayaan kooxo ka socda dhammaan dalalka gees ka Afrika iyo dalka Masar ayaa sannadkan lagu qa banaya dalka Tanzania.
Tababarraha macallimiinta kubadda Koleyga, Sucaad Cabdullaahi Gallow ayaa sheegtay in sannadkan kooxda kubadda koleyga ku mataleysa dalka Soomaaliya laga filanayo in ay tartanka ku guuleystaan, waxaa ay sheegtay in diyaar garow xoog gan ay sameysay kooxda oo ay sidoo kale ka mid yihiin ciy aaryahanno qurbajoog ah.
"Rajada aan qabno kaliya waxaan kugu sheegi kara inay tahay ilaa kulanka kama dambeysta inan ku guuleysano, sidaa wax aan u leeyahay waxaan oggahay tayada ciyaaryahannada koo xda.” Sucaad ayaa sida u sheegtay Hiir aan Online.
Macallin Sucaad Cabdullaahi Gal low ayaa taariikh dheer ku leh kubadda kole yga ee Soomaaliya, waxaana ay ka mid aheyd kooxdii caanka aheyd ee Horseed. Waxaa ay sheegtay kooxda ka qaybgalay sa tartanka inay ku guuleysteen tartankii kubadda Koleyga Dumar ee lagu qabtay Muqdisho, kaas oo ay ka qaybgal een koo xo ka socday dowladgobolleedyada.
Macallinka kooxda koleyga dumarka ee Muqdisho City, Mulki Nuur Muudey ayaa dhankeeda sheegtay in dhowaan kooxda ay tababar u aadi doonaan dalka Qatar, oo muddo labo toddobaad ah ay isku diya arin doonaan.
Kubadda Koleyga ee haweenka ayaa Soomaaliya xilligii dow laddii dhexe ka mid aheyd tartamada loogu jecelyahay, balse xiis aha wuxuu ku ekaa xilligaa oo ma jirin kooxo iyo tartamo lagu qa btay dalka, hadd ase waxaa socda iskudayo lagu doonayo in dib loo soo nooleeyo qaybaha isboorti ska ee dalka.